Iimpawu ezenza i-Gmail yahluke que ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 378
Amanyathelo okugqibela Ide kangakanani inkonzo ye-imeyile kaGoogle, kukubeka i-Gmail. Ii-imeyile ze-Gmail zezona zisetyenziswa kakhulu kwaye zithandwa kwihlabathi ngenani elifanelekileyo labasebenzisi abazizigidi ezingama-600.
Okwangoku iGmail inyusa imihla ngemihla, kwaye oku kukhokelele kuGoogle ukuhlaziya ujongano lweGmail kwinqanaba elitsha, njengokufaka izinto ezintsha kunye nezinye izixhobo zeenguqulelo ezintsha.
Ngaphandle kobukho bezinye Amaqonga enza iinkonzo ze-imeyile ezinje nge-Outlook, Microsoft, Yahoo Mail kwaye ziyaqhubeka nanamhlanje, nangona kunjalo azifani nokubonelela ngokugcina, ukukhangela kunye nezisombululo zombutho njengoko kwenza i-Gmail.
Ukujonga loo nto Izibonelelo zine-gmail kwaye ingaba yimpumelelo kangakanani, uGoogle ngokunikezela kwabasebenzisi kufuneka athengise intengiso, afake iindaba ngokwemiyalezo ye-imeyile zabo, aseke ukukhushulwa, imiyalezo evela kubaxhamli ukuba iqwalaselwe ngumbutho.
Enkosi kwindaleko i-Gmail ebinayo kula maxesha, sikwazisa, i
Iimpawu ezenza ukuba i-Gmail yahluke,
Ukufikelela ngesimemoNawuphi na umsebenzisi omtsha angathumela izimemo kumaqela abantu.
Ukugcinwa kwe-2.5 GB: Ngelixa amanye amaqonga e-imeyile kufuneka ucime ii-imeyile ukuze ufumane indawo, i-Gmail ikunika amandla okugcina.
UseshoNgokukhawuleza nangokulula ufumane amagama aphambili ukufumana i-imeyile oyifunayo.
Ukuseta okubonakalayoUkukhetha ukuba i-Gmail yenza ukuba njengomsebenzisi ungabeka umfanekiso ongasemva kwi-imeyile kwaye uyenze ngokwezifiso.
Iiakhawunti ezithunyelweyo; Unakho ukufikelela kwitreyi yobuqu, kwimeko yendalo esingqongileyo, igama lenziwa kwabanye abantu ababhala egameni leakhawunti.
Qhuba kunye neziXhobo zeXwebhuUnokwenza uxwebhu imisebenzi egcinwe kuGoogle amaXwebhu.
I-iOS okanye i-AndroidUngasebenzisa i-Gmail kwii-mobiles zakho njengohlobo lwe-desktop.
Iilebhu: Kungumsebenzi apho unokumisa ukuthunyelwa ngemizuzwana engama-30 ukusukela ngexesha lokuthunyelwa kushiye ibhokisi ephumayo. IiLabs zinoluhlu lwezinto onokukhetha kuzo apho unokwenza ngokwezifiso i-imeyile interface.
Imiyalezo yeHangouts, GTalk: ikunika ingxoxo apho abasebenzisi banokuthumela khona imiyalezo yabo kubafowunelwa babo kwaye benze iifowuni zevidiyo.
Hlela i-imeyile: I-Gmail ivumela umsebenzisi ukuba ahlele ii-imeyile zabo ngendlela enocwangco, asebenzise iindidi zokhetho lwabo ezinje ngeeNgcaciso, iiNkuthazo kunye nezeNtlalontle okanye ongeze ezinye ngokwendlela yabo.
Ikuvumela ukuba uthulise ii-imeyile zeqela ukunqanda ukuphazamisekaIkuvumela ukuba uhlaziye umyalezo ngexesha lencoko apho ungayi kufumana zaziso ngokuthe ngqo.
Thulisa umsonto ye-imeyile.
Cofa kwi ukhetho "Thulisa".
I-Gmail inephaneli Ukujonga kuqala: Ukwenza olu khetho kufuneka usebenze iiLebhu ngokunqakraza kulungelelwaniso lweLab kwaye ujonge ukhetho ukwenza ukugcina utshintsho.